Ny Warranty MediaLight - Lighting Bias MediaLight
Ny Warranty MediaLight
Ny MediaLight dia misy fiantohana 5 taona feno ho an'ny singa rehetra. Manarona ny fatiantoka sy fangalarana mihitsy aza izahay.
Ny MediaLight dia manana vidiny eo alohany noho ny jiro LED hafa satria mampiasa LED tsara kokoa sy marina kokoa ary singa matanjaka kokoa izahay. Izahay dia mamolavola ny zava-drehetra amin'ny fomba maotina mba hahamora ny fanamboarana ny rafitra raha misy ny tsy mety. Miaraka amin'ny rafitra mora vidy dia matetika ianao no mila manolo ny rafitra iray manontolo rehefa tapaka ny singa iray. Midika izany fa rehefa mandeha ny fotoana, ny vokatra dia tsy vitan'ny hoe manatsara kokoa - kely ny vidiny!
Raha misy zavatra mitranga amin'ny MediaLight anao, dia ho fantarinay ny antony ary handefasantsika ampahany fanoloana ilaina na hosoloinay maimaim-poana.
Ohatra amin'ny fangatahana fiantohana voaaro:
"Tondra-drano ny lakaly ary nentiko niaraka tamin'ny fahitalaviako."
"Tsy nijanona intsony ny jiro ary tsy haiko ny antony."
"Voaroba ny studio-ko" (rakotra raha toa ka misy tatitra ataon'ny polisy).
"Notifiriko ny fametrahana ahy."
Ny fandavana ny fanampiana troubleshoot an'ny solontenan'ny MediaLight ny antony mahatonga ny olana avy amin'ny lisitr'ireo olana mahazatra.
Amin'ity toe-javatra ity dia tsy afaka mandefa ampahany soloina izahay mandra-pahatongan'ny fampahalalana omena ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana.
Fandringanana na fanariana an-tsitrapo
Fandefasana an-trano aorian'ny 2 taona hatramin'ny daty nividianana. Aorian'ny roa taona dia hosoloinay ireo faritra simba na tsy hita mandra-pahatongan'ny 5 taona hatramin'ny daty nividianana, fa handefa faktiora IHANY ho an'ny sarany fandefasana (na afaka manome kaonty UPS na Fedex ianao).
Ny fandefasana iraisam-pirenena rehetra manomboka amin'ny 65 andro aorian'ny nahazoana ny vokatrao. Ankoatr'ireo fonosana very (jereo ny fandefasana pejy raha hianatra rehefa heverina ho very ny fonosana iray) na singa malemy dia tsy manarona ny fandefasana entana iraisam-pirenena izahay. Hosoloinay ireo faritra ilaina tsy andoavam-bola, fa kosa hampiditra ny fandefasana alohan'ny andefasana ireo ampahany. Saika tsara kokoa hatrany ny mividy MediaLight amin'ny mpivarotra ao amin'ny faritra misy anao izay handrakotra ny fandefasana ireo faritra soloina.
Manomboka amin'ny fametrahana ny MediaLight anao dia ho eo izahay hanampy. Raha misy tsy mandeha amin'ny vokarinay dia aza manahy! Tianay ny hampahatsiahy anao anao izay nahatonga anay niavaka tamin'ny orinasan-jiro hafa tamin'ny voalohany: singa-kalitao maharitra mandritra ny taona maro.
Hitanay fa misy lavaka banga eo amin'ny tsena raha ny amin'ny marina, ny kalitao ary ny serivisy. Izahay dia mitazona ireo mpamatsy antsika amin'ny fenitra mitovy ihany. Rehefa manolo ampahany iray izahay dia manonitra anay ny mpamatsy antsika - izany dia mahatonga ny vokatra rehetra ho tsara kokoa ary mitazona ny olona tompon'andraikitra.
Ny MediaLight dia manao izay lazainy amin'ny vifotsy. Nampidirinay ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fametrahana anao, noho izany dia tsy hisy fitaovana fanampiny takiana na fitsangatsanganana any amin'ny magazay fivarotana fitaovana hanombohana miaraka amin'ny The MediaLight anio!